हवाई यात्रा बुकिंग अब एक जीवन र मृत्यु निर्णय हो
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » हवाई ताजा समाचार » हवाई यात्रा बुकिंग अब एक जीवन र मृत्यु निर्णय हो
एयरलाइन्स • हवाई अड्डा • उड्डयन • सरकारी समाचार • हवाई ताजा समाचार • स्वास्थ्य समाचार • समाचार • पुनर्निर्माण • सुरक्षा • प्रविधि • पर्यटन कुराकानी • यातायात • यात्रा गन्तव्य अपडेट • यात्रा तार समाचार • संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रेकिंग न्यूज • विभिन्न समाचार
होटल, आकर्षण, ढुवानी, पसल, र रेस्टुरेन्टहरु हवाई राज्य मा ब्यापार खोल्न को लागी लडिरहेका छन्। एयरलाइन्स नयाँ पर्यटन स्रोत बजार गन्तव्य को लागी जोडिएको छ Aloha राज्य। व्यापार राम्रो छ - तर यो एक आत्महत्या मिशन हो?
चुनाव नजिकिदै छ। राज्यमा कोहि पनी बहादुर छैनन् सुझाव र प्रतिबन्ध लागू गर्न को लागी नराम्रो गरी हवाई को लागी सुरक्षित यात्रा को सुविधा को लागी आवश्यक छ।
हवाई को कुन भाग यात्रा गर्न को लागी सुरक्षित छैन अहिले यात्रुहरु बुझ्दैनन्?
के भाग "हवाई आगन्तुकहरु को लागी सुरक्षित छैन"के पर्यटकहरु बुझ्दैनन् जब उनीहरु तौलियाको छेउमा तौलिया संग हवाई को समुद्री तटहरुमा भीड लगाउँछन्, सामाजिक दूरी असम्भव बनाइरहेका छन्?
कुन भाग "हवाई आगन्तुकहरुको लागी सुरक्षित छैन " के उनीहरु पाउँदैनन् जब रेष्टुरेन्टहरु को लागी लामो लाइनहरु आदर्श हुन्?
कुन भाग "हवाई सुरक्षित छैन आगन्तुकहरु " बुझ्न सकिदैन जब पर्यटकहरु लाई अब स्वागत छैन, अस्पतालहरु १२५% क्षमता मा चलिरहेका छन्, र प्रसिद्ध Aloha आत्मा हरायो?
Oahu, Maui, Kauai, Lanai, Molokai, र हवाई को ठुलो टापु मा पर्यटन बूमिंग रहन्छ, भले ही हवाई गवर्नर Ige, लेफ्टिनेंट गभर्नर ग्रीन, CDC का प्रमुख, र जोन डी फ्राइज, सीईओ हवाई पर्यटन प्राधिकरण, आगन्तुकहरु संग यात्रा गर्न को लागी बिन्ती गर्दै छन् Aloha यस समयमा राज्य।
दुबै स्थानीय र आगन्तुकहरुलाई स्पष्ट सन्देश "मात्र आवश्यक यात्रा!"
यो आज मृत्यु दर iकोभिड 19१ crisis संकटको बेला हवाईमा अहिलेसम्मकै उच्च रेकर्ड गरिएको छ।
Coranavirus हवाई मा केसहरु
अगस्त २४, २०२० मा, हवाई राज्यले १ 24 new नयाँ COVID-१ cases केसहरु एकै दिनमा दर्ता गर्यो, जसको कारण गम्भीर प्रतिबन्ध र तालाबन्दी भयो।
अगस्त २५, २०२१ मा, हवाई राज्यले एकै दिनमा 25२५ नयाँ COVID-2021 केस दर्ता गर्यो। केवल केहि साना प्रतिबन्धहरु र कुनै तालाबन्दी ठाउँ मा छन्।
कोभिड -१ Death हवाईमा मृत्यु
अगस्त २४, २०२० मा कोभिड १ of को हवाईमा कोहि मरेनन्। यो महामारी को शिखर मा थियो।
अगस्त २५, २०२१ मा, हवाई मा-जना कोभिड १ of बाट मरे, यो महामारी को प्रकोप पछि एक दिन मा रेकर्ड गरिएको सबैभन्दा धेरै संख्या हो।
हवाई यातायात आगमन
अगस्त २३, २०१ On मा २१,४23५ मानिसहरु अमेरिकी घरेलु गन्तव्यहरु बाट हवाई को बिमानस्थलहरुमा आइपुगे।
अगस्त २३, २०२० मा, आगमन संख्या १,23०० मा तल गयो। कसैलाई खोप लगाइएको थिएन।
अगस्त २३, २०२१ मा, २,, ५४23 यात्रुहरुको रेकर्ड अन्य ४ US अमेरिकी राज्यहरु बाट हवाई को बिमानस्थलहरुमा अवतरण भयो।
संयुक्त राज्य अमेरिका को होनोलुलु, काहुलुई, Lihue, Hilo, र Kona मा आइपुग्ने बाहेक ट्रान्स प्रशान्त घरेलु यात्रीहरु गणना गरीन्छ।
अगस्त २०२० मा कसैलाई खोप लगाइएको थिएन।
अगस्त २०२१ मा हवाईमा %०% भन्दा बढीले खोपको कम्तीमा एउटा खुराक पाएका छन्।
लेफ्टिनेन्ट गभर्नर ग्रीन को अनुसार, टीउहाँ हवाई राज्य मा अस्पताल कब्जा दर अब १२५%छ। हृदयघात र अन्य गम्भीर रोगहरु संग मानिसहरु अब आईसीयू मा पहुँच छैन कोरोनाभाइरस बिरामीहरु को उच्च संख्या को कारण।
हवाई बिरामी छ। हवाई बहामाजस्ता देशहरु भन्दा धेरै बिरामी छ उदाहरण को लागी कि एक टियर4अमेरिकी यात्रा चेतावनी को अधीनमा छन्:
यो समयमा यात्रा नगर्नुहोस् !
आगन्तुकहरु केहि देखाउनु पर्छ ALOHA हवाई को मान्छे र घर बस्न को लागी।
पर्यटन हो निजी पूँजी को लागी सबैभन्दा ठूलो एकल स्रोत हवाई को अर्थव्यवस्था। २०१ In मा, हवाई को पर्यटन अर्थव्यवस्था रेकर्ड गरिएको छ:
Tax राज्य कर राजस्व: $ २.० billion बिलियन (+१.४%,+२ 2.07.५ मिलियन YOY बनाम २०१))।
2019 10,424,995 मा आगन्तुक आगमन: XNUMX।
स्वास्थ्य बनाम अर्थव्यवस्था
स्पष्ट विजेता हवाई मा पर्यटन अर्थव्यवस्था देखिन्छ। सायद यो हो कि खोप विरोधी प्रदर्शनकारीहरुको मनमा हुन्छ जब उनी लेफ्टिनेन्ट गभर्नर ग्रीनको घर अगाडी प्रदर्शन गर्छन्।
अगस्त २,, २०२० ० 25::2021
बिन्दु यो हो: हाम्रा अस्पतालहरु १२५% क्षमता मा चल्छन् कुनै आईसीयू बेड उपलब्ध छैन। यसले साँच्चै कुनै फरक पार्दैन कसले हाम्रो राज्यमा भाइरस ल्याइरहेको छ। हामीले यो छलफल पहिले गर्नुपर्ने थियो।
यदि तपाइँ एक clickbait भडकाऊ शीर्षक लेख्न को लागी जाँदै हुनुहुन्छ कम से कम व्याकरण सही पाउनुहोस्! जबकि तथ्या्क सही छन् त्यहाँ शून्य प्रमाण पर्यटन को प्रसार संग यहाँ केहि गर्न को लागी छ।